Ny hafainganam-pandeha ny fampandrosoana ny teknolojia maoderina no tsy mahagaga. Samy hafa ny fomba fifandraisana popping, ara-bakiteny isam-bolana. Ny ankamaroan’izy ireo dia mitaky manokana sarany, fa misy ny fitaovana, fitaovana sy ny fampiharana izay mamela anao hifandray amin’ny tena maimaim-poana. Andeha isika hijery ny sasany amin’izy ireo.
Tsarovy ny fomba teo aloha aho, dia ny olona izay teo amin’ny iray lavitra avy amin’ny hafa. Ny taratasy, entana sy ny entana, dia anjara rehetra ny fiainana andavanandro. Fa, hitanareo, ny fomba toy izany ny serasera tsy azo antoka foana na mora. Izany dia takatra ary avy eo, ka nisy ny finday. Ankehitriny, miaraka amin’ny finday afaka tsy manao antso ihany koa fa ny voly ny tenany. Ny hany drawback dia ny miantso ny hatrany ho sarany.
Amin’izao fotoana izao, mba hifandraisana teny lavidavitra teny ny maimaim-poana amin’ny alalan’ny Internet. Misy isan-karazany ny iraka sy ny tambajotra sosialy. Izy rehetra dia natao ho fampiharana izay afaka hametraka eo amin’ny finday. Asa ho an’ny solosaina Na dia ny telefaonina no tsy mamela anao hametraka ny fampiharana, ianao dia mbola afaka manohy ny fifandraisana amin’ny solosaina. Izany no azo atao noho ny tambajotra sosialy. Facebook, YouTube renirano, Twitter ireo rehetra ireo apps mamela anao hifandray amin’ny alalan’ny hafatra, ary amin’ny alalan’ny antso an-telefaonina. Ary ny zavatra rehetra dia natao ho an’ny rehetra.
Fandefasan-kafatra viber eo amin’ny solosaina ihany koa ny mety ho nametraka. Amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra ireo ihany avy amin’ny telefaonina na ny fahafantarana momba ny fahafahana izany. Ny iray amin’ireo malaza indrindra fomba maimaim-poana ny fifandraisana dia ny Skype. Io fandaharam-potoana ankehitriny dia mieli-patrana manerana izao tontolo izao. Eto misy premium endri-javatra, fa asa fototra dia azo maimaim-poana. Izany no mora indrindra sy ny fomba mahazatra indrindra mba hifandray lavitra ny fianakaviany sy ny namany, ny kalitao izay dia miankina amin’ny hafainganam-pandeha amin’ny Aterineto. Maimaim-poana ny firesahana amin’ny finday Manokana ho an’ny serasera amin’ny alalan’ny finday no namorona ny am-polony avy hatrany iraka, na izany aza eo aminy sasany ihany no tena mety sy azo idirana.
Miaraka aminy izahay ankehitriny jereo
Viber voalaza etsy ambony toy ny fandaharana fa ny solosaina, fa amin’ny telefaonina mampiasa izany tsy tsy mety. Afaka hiresaka maimaim-poana amin’ny rehetra izay efa nametraka viber. Whatsapp koa ny nivoaka vao haingana, nefa efa nahazo laza be. Ny tombony dia ny hoe miaro ny bateria an-tariby. Izy no tsara kokoa noho ny Skype na viber, na dia tsy ny tsara indrindra Android mpanjifa
Free online dating site tsy misy fisoratana anarana →